आज बढ्यो सुनको मूल्य, तोलामा यति सम्म पुग्यो ! हेर्नुस – Ap Nepal
काठमाडौं । आइतबार सुन तोलामा सामान्य मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार एक सय रुपैयाँले बढेर सुनको मूल्य प्रति तोला ९० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।
शुक्रबार तोलामा एकैपटक ९०० रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्यमा आइतबार भने तोलामा एक सय रुपैयाँले बढेको हो । आज तेजावी सुन प्रतितोला ८९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज चाँदी प्रतितोला १ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा लागू भएका कारण देशका अधिकांश शहरमा सुनको कारोबार भएको छैन ।
Prevमहान श्रीमान विनोदले के गरे य स्तो ? सेटमै चल्यो रुवा; बासी (भिडियो सहित)
Nextएकदमै खु: सिको खबर ! अनिता आफै हिड्न स; क्ने भइन, अ नुहारमा यस्तो चमक (भि डियो हेर्नुहोस )